Tenisy – «Afrique Australe» : tsy nanampy ny minisitera | NewsMada
Nanainga omaly ny delegasiona malagasy, eo amin’ny taranja tenisy, handeha hanatrika ny fifaninanana, fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika Aostraly. Fihaonana, hotanterahina any Pretoria, Afrika Atsimo ny 9 ka hatramin’ny 16 janoary ho avy izao, ho an’ny sokajy zandriny U12, U14 ary U16 lahy sy vavy. Mpilalao 12 mianadahy no hiaro ny voninahi-pirenena, amin’izany ka roa isaky ny sokajy avy, izy ireo. Ny ankizy roa amin’ireo dia miatrika fiofanana any Maraoka ka avy hatrany dia hamonjy ny delegasiona atsy Afrika Atsimo.
Naneho ny alahelony, tamin’ny mpanao gazety, Rajaobelina Tsialiva, filohan’ny federasiona malagasin’ny tenisy, fa tsy mba nanampy na dia tapakila iray aza ny minisiteran’ny Fanatanjahantena, tamin’izao fandehanana izao, na efa nametraka fangatahana dieny mialoha sy nihaona tamin’ny minisitra mivantana aza. Vokany, ireo raiamandreny no niantoka 100% -n’ny fandehanan’ireo ankizy sy ny mpanazatra iray. Nandaniana 3.500.000 Ar ny ankizy iray amin’izany. Nohamafisin-dRazafimahatratra Dina, tale teknika nasionaly fa efa hatramin’ny taona 2013 ny taranja tenisy, no tsy nahazo «subvention» intsony fa dia niala am-paosy, tamin’ny fivoahana tany ivelany sy ny fanaovana ireo hetsika rehetra natao.
Manana ny lanjany ity fifaninanana afrikanina ity satria hiadiana ny tapakila hiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, hatao any Afrika Atsimo ihany ny 7 ka hatramin’ny 19 marsa, ho avy izao.
Tafita amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ireo fito voalohany, ho an’ny U14 sy U16 ary isan-tarika kosa ny an’ny U12.
Ireo ankizy mandrafitra ny ekipa nasionaly :
U12 vehivavy : Maholy ; Safidisoa
U12 lehilahy : Sampras ; Finoana
U14 vehivavy : Mioty ; Finaritra
U14 lehilahy : Toky (Maraoka) ; Lanja
U16 vehivavy : Tsantaniony (Maraoka) ; Sariaka
U16 lehilahy : Vahia ; Dimitri